बाँकेको करोडौं विकास बजेट फ्रिज हुने निश्चित ! — Paschimnews.com News From Nepal
बाँकेको करोडौं विकास बजेट फ्रिज हुने निश्चित !
पश्चिमन्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७५/३/७ गते
चालु आर्थिक बर्षमा करोडौं रुपैयाँ खर्च नभएर फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ । चालु आर्थिक बर्षको अन्तिम महिनामा पूँजीगत खर्च ५६.९४ प्रतिशत मात्र खर्च भएकाले विकासका लागि आएको रकम फर्कने निश्चित छ । यद्यपि, असारको महिनामा गरिने हतारको कामले केही बजेट खर्च भएपनि करोडौं रकम फ्रिज हुने अवस्था देखिएको हो ।
चालु आर्थिक बर्ष ०७४/०७५ मा बाँकेका लागि पूँजीगत खर्चका लागि ७ अर्ब ८ करोड १९ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएकोमा जेठ मसान्तसम्म जम्मा ४ अर्ब ३ करोड २१ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका कोष नियन्त्रक सम्भु राज आचार्यले जानकारी दिए । अब खर्च गर्न बाँकी ३ अर्ब ४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ असार महिनामा खर्च हुनसक्ने स्थिति छैन ।
विकास तर्फको बजेट सक्नका लागि दैनिक साढे ९ करोड खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । ‘फिल्डमा काम नै भएको छैन, कसरी खर्च हुन्छ रकम ?’, एक सरकारी कर्मचारी भन्छन् ।
विकासका योजनाहरु गतिशिल रुपमा नहुँदा बजेट नै फ्रिज हुन लागेको हो । यसअघिका बर्ष जस्तै चालु आर्थिक वर्ष सकिदै गर्दा नेपालगन्जस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा (कोलनिका) भुक्तानीका लागि भिड लाग्ने निश्चित छ । ढिलो गरी काम गर्ने र खर्च फस्र्यौट गर्ने प्रवृत्ति यसबर्ष पनि दोहोरिंदैछ । यद्यपि, शतप्रतिशत बजेट खर्च हुँदैन भन्नेमा ढुक्क हुने स्थिति भने देखिइसकेको छ ।
कोलेनिका बा“केका प्रमुख कोष नियन्त्रक ठाकुरप्रसाद पौडेल पनि पूँजीगत खर्च हुनेमा आशंका व्यक्त गर्छन् । ‘यो आर्थिक बर्षको अन्तिम महिना हो’, प्रमुख पौडेलले भने, ‘सबै बजेट सकिएला जस्तो लाग्दैन ।’
यद्यपि, चालु शिषर्कको खर्च भने लक्ष्य तर्पm उन्मुख छ । ९ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख बजेट रहेको चालु तर्फ ८०.७५ प्रतिशत खर्च भैसकेको कोष नियन्त्रक आचार्य बताउँछन् । चालु तर्फ ८ अर्ब ४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ । बाँकी रकम पनि यसै महिना खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । तलब, भत्तामा खर्च हुने रकम भएकाले उक्त शिर्षकको बजेट लक्ष्य अनुसार खर्च भएको हो ।
बाँकेका लागि चालु र पूँजीगत गरी १७ अर्ब ४ करोड ५५ लाख बजेट प्राप्त भएकोमा जेठ मसान्तसम्म १२ अर्ब ७ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ । यसरी हेर्दा ७०.८६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिन्छ । पूँजीगत खर्च कम भएपनि चालु खर्च बढी हुँदा खर्चप्रतिशत भने सन्तोषजनक देखिएको हो ।